Kudengenyeka kwenyika Kwakasimba kuchangonyorwa paChitsuwa cheKrete, Girisi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Greece Kupwanya Nhau » Kudengenyeka kwenyika Kwakasimba kuchangonyorwa paChitsuwa cheKrete, Girisi
Kuputsa Nhau dzeEurope • Greece Kupwanya Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Kune dzinosvika zana kubva pa100 kudengenyeka kwenyika pasi rese gore rega. Kudengenyeka kwenyika 6.5 kune mukana wekukonzera kumwe kukuvara. Munzvimbo dzine vanhu vazhinji, kukuvara kwacho kunogona kunge kwakanyanya.
Kudengenyeka kwenyika 6.5 kwakanyorwa muKrete kwakangoderedzwa kusvika 5.9 - chii chine mashoma maitiro muzviitiko zvakawanda
5.9 yaive chiyero cheEMSC munaGunyana 27 (Muvhuro pa9.17 am) yekudengenyeka kwenyika kuGreek Island yeKrete.
Huwandu hwevanhu munharaunda iripedyo vanopfuura zviuru zvina mazana masere
Hapana dhata pamusoro pekukuvara kana kukuvara kuchiri kuzivikanwa
Krete inzvimbo huru yekufamba uye yekushanya kuGreek uye inofarirwa nevashanyi veEuropean vanobva kuGerman nedzimwe nyika zhinji.
Pakutanga ma tweets anoti kudengenyeka kwenyika kwakanzwika kunge kudiki, mamwe ma tweets anoti: Ndakaona kudengenyeka kwenyika kwakasimba muStalis, Krete mangwanani ano, imba yose yanga ichidedera.
Nhamba dzechipiri dzakadzikiswa kubva pa6.0 kusvika pa5.8, dzimwe dzakakwidzwa kusvika 6.2, mamwe maTweets anoti 6.5. Reuters nhau agency yakasimbisa 6.5 ine 2km yakadzika inoreva EMSC.
IEuropean Mediterranean Seismological Center (EMSC) zvisinei yakasimbisa simba re5,9 uye kudzika kwemakiromita gumi.